के हो लङ कोभिड? यसबाट कसरी बच्ने? – Karnalisandesh
के हो लङ कोभिड? यसबाट कसरी बच्ने?
प्रकाशित मितिः १ कार्तिक २०७७, शनिबार १४:०८ October 17, 2020
काठमाडौं। धेरै जसो मानिसहरुका हकमा कोभिड–१९ छोटो समयका लागि हुने हल्का रोग हो । तर केही व्यक्तिहरु थकान, निरन्तरको दुखाइ र श्वासप्रश्वासको समस्याबाट महिनौँसम्म प्रताडित छन् । ‘लङ कोभिड’ अर्थात् ‘लामो कोभिड’ नाम दिइएको यस अवस्थाबाट मानिसहरुको जीवनमा नराम्रो असर परिरहेको छ र मानिसहरु थोरै समय हिँड्दा पनि थकित भएका कथाहरु बाहिरिरहेका छन् । महामारीमा ज्यान जोगाउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत छ, तर, कोभिड संक्रमणका कारण मानिसहरुले दीघकार्लिन समस्या भोग्नु परेको जानकारी पनि बढ्दो रुपमा आइरहेको छ। किन केही मानिसहरु लामो समय कोभिडबाट प्रताडित छन् वा के सबै पूर्ण निको हुनेछन् वा छैनन् ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ पनि रहस्यमै छ ।
बिरामीहरुले साझा गरेका लक्षणहरुको सूची वा यसको चिकित्सकीय परिभाषा छैन। लङ कोभिड भएका दुई व्यक्तिको अनुभव फरक हुनसक्छ। यद्यपी, सबैभन्दा सामान्य विशेषता अति थकान हो । अन्य लक्षणहरुमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, निको नहुने खोकी, जोर्नीको दुखाइ, मांशपेशीको दुखाइ, सुन्न र हेर्नमा समस्या, टाउको दुखाइ, वास्ना र स्वाद लिने क्षमतामा ह्रास तथा मुटु, फोक्सो, किड्नी र पेटमा क्षति आदी छन्। डिप्रेसन, एन्जाईटी र स्पष्टसँग सोच्ने क्षमतामा कमी आदी मानसिक समस्याहरु पनि दर्ज भएका छन् ।
यसले मानिसहरुको जीवनको गुणस्तर पूर्ण रुपमा खतम पार्छ । ‘मेरो थकान यसअघि मैले अनुभव गरेजस्तो हुँदै होइन,’ संक्रमित जेड ग्रे क्रिष्ट्रीले भने। लङ कोभिड मानिसले निको हुनका लागि इन्टेन्सिभ केयरमा समय बिताएको जस्तो होइन । सामान्यत अहिले हल्का संक्रमणमात्रै देखिएका व्यक्तिमा पनि पछि गएर दीर्घकालिन र गम्भीर स्वाथ समस्या देखिन सक्छ। ‘लङ कोभिड अस्वित्वमा छ भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन,’ एक्सीटर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डेभिड स्ट्रेनले भने । उनले आफ्नो क्रोनिक फटिग सिन्ड्रोम क्लिनिकमा लङ कोभिडका बिरामीहरुलाई हेर्न थालिसकेका छन् ।
रोमको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा भर्ना भएका १ सय ४३ व्यक्तिहरुलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि फलो गरेर यसबारे अध्ययन गरिएको थियो। यो अध्ययन रिपोर्ट जर्नल अफ द अमेरिकन मेडिकल एशोसियसनमा प्रकाशित छ। रिपोर्टअनुसार ८७ प्रतिशतमा झन्डै दुई महिनापछि कम्तिमा एउटा लक्षण देखिएको थियो र आधाभन्दा बढीमा अझै थकान थियो। यद्यपी, यस्ता अध्ययनहरु अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका अल्पसंख्यक व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रीत छन्। बेलायतमा झन्डै ४० लाखले प्रयोग गरिरहेको कोभिड सिम्टम ट्रयाकर एपमा १२ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा ३० दिनपछि पनि लक्षण कायम रहेको देखिएको थियो। यसको पछिल्लो अप्रकाशित तथ्याङअनुसार संक्रमित व्यक्तिमध्ये २ प्रतिशतमा ९० दिनपछि लङ–कोभिडका लक्षण देखिएको छ।
यस्तो देखिन्न। डब्लिनमा भएको अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमितमध्ये आधामा १० सातापछि पनि थकान कायमै थियो। एक तिहाई शारिरीक रुपमा काममा फर्कन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
चिकित्सकहरुले कोरोना संक्रमणको गम्भीरता र थकानबीच कुनै सम्बन्ध फेला पर्न सकेनन्। यद्यपी, कडा शारीरिक र मनासिक थकान लङ कोभिडको मात्र एउटा लक्षण हो ।
लेस्टर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा निको भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने कार्यक्रम (पिएचओपिएसपी) का प्रमुख अनुसन्धनकर्ता क्रिस ब्राइटलिङको बुझाइमा निमोनिया भएका व्यक्तिहरुमा अझै धेरै समस्या हुनसक्छ किनकी उनीहरुको फोक्सोमा खराबी हुन्छ।
यसबारे धेरै बुझाइहरु छन्, तर ठोस जवाफ छैन ।शरीरको अधिकांश भागबाट भाइरस सफा भएको हुनसक्छ। तर, केही साना पकेटहरुमा कायम रहिरहनसक्छ । ‘यदी दीर्घकालिन झाडापखाला छ भने तपाईंको पेटमा भाइरस भेट्नुहुन्छ । यदी सुँघ्ने क्षमतामा ह्रास देखियो भने यो नशामा हुन्छ । त्यसैले समस्या यसले सिर्जना गरेको हुनसक्छ,’ किङ कलेज लण्डनका टिम स्पेक्टरले भने ।
कोभिडपछि प्रतिरोधी प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्कदैन र यसले बिरामी गराउँछ भन्ने एउटा सोच छ। मानिसका अंगहरुले जसरी काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई संक्रमणले परिवर्तन पनि गरिदिनसक्छ।
तर कोभिडले मानिसको मेटाबोलिज्मलाई पनि बदल्न सक्छ। कोभिडको असरस्वरुप मधुमेह विकास भएपछि आफ्नो ब्लड सुगर लेभललाई नियन्त्रणमा राख्न मानिसहरुले संघर्ष गर्नुपरेका घटना आइरहेका छन्। सार्सले यसरी कम्तिमा १२ वर्षसम्म शरीरमा फ्याट बढ्नेगरी परिवर्तन ल्याएको थियो ।
दिमागको प्रणालीमा परिवर्तन भएका सुरुवाती संकेतहरु देखिएका छन्। तर, यसबारे अझै अनुसन्धान हुन बाँकी छ। अनि, कोभिड–१९ ले पनि असामान्य रुपमा रगत जम्ने, शरीरमा रगत फैलाउने ट्युबहरुको नेटवर्कमा क्षति पु¥याउनेजस्ता रगतमा अनौठा परिवर्तन ल्याउँछ ।
भाइरलपछिको थकान वा भाइरलपछिको खोकी सामान्य र दस्तावेजिकरण भइसकेको कुरा हो । सायद हामी सबैलाई त्यस्तो संक्रमण भएको थियो र जसबाट पूर्ण निको हुन वर्षौँ लाग्यो। ग्रन्थीको रोग भएका दशमध्ये झन्डै एक व्यक्तिलाई महिनौँसम्म रहनेगरी थकान हुन्छ। अनि फ्लु, विशेषगरी सन् १९१८ को महामारीपछि पार्किन्सनको जस्तै लक्षणसँग सम्बन्धित हुनसक्ने पनि संकेत गरिएको छ। ‘कोभिडको हकमा अझै धेरै लक्षणहरु देखिन्छ र मानिसहरुको संख्या पनि धेरै हुने देखिन्छ,’ प्रोफेसर ब्राइटलिङले भने,‘यद्यपी, जतिबेलासम्म संक्रमित भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक तथ्याङ्क आउँदैन, त्यतिबेलासम्म यस्ता लक्षणहरु ठ्याक्कै कति सामान्य हुन् भन्ने हामीलाई ज्ञान हुँदैन ।’
उनी थप्छन्, ‘जसरी भाइरसले होस्टलाई अलग तरिकाले आक्रमण गर्छ र जसरी यसले कोशिकाको व्यवहारमा अलग तरिकाले परिवर्तन ल्याइदिन्छ, त्यसलाई हेर्दा मानिसमा अन्य भाइरस र विद्यमान लक्षणको दाँजोमा थप कडाखाले संक्रमण देखिन्छ।’
समयसमै लङ कोभिड भएका मानिसहरुको संख्या घट्नेजस्तो देखिन्छ। तथापि, यस वर्ष विश्वव्यापी फैलनुअघि भाइरस केवल २०१९ को अन्त्यमा उदय भयो। त्यसैले यहाँ लामो समयको तथ्याङ्कको कमी छ।
‘हामीले मानिसहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा २५ वर्षसम्म फलो गर्न भनेका छौं। मलाई आशा छ, केवल थोरै मानिसहरुसँग मात्रै एक वर्षपछि समस्या हुनेछ। तर, म गलत हुनसक्छु,’ प्रोफेसर ब्राइलिङले भने।
यद्यपी, अहिले निको भएजस्तो देखिए पनि मानिसले दीर्घकालिन जोखिम सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने चिन्ता छ। क्रोनिक फटिग सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरुमा फेरि यस्तो समस्या हुनसक्नेछ र भविष्यका संक्रमणहरुले यसलाई थप बढाउनेछ भन्ने चिन्ता छ। ‘यदी लङ कोभिडले उस्तै शैली पछ्यायो भने म केही निको हुने अनुमान आशा गर्छु, तर यदी यसले प्रतिक्रियाका लागि केवल अर्को कोरोना भाइरसको संक्रमण लियो भने हरेक जाडोमा समस्या हुनसक्छ,’ प्रोफेसर स्ट्रेनले भने।
लङ कोभिड भए जस्तो लागेमा के गर्ने ?
बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिसले ‘योर कोभिड रिकभरी प्लान’ ल्याएको छ। यसले सल्लाह दिन्छ, विशेषगरी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरुलाई। यसले उर्जा बचाउनका लागि तीन ‘पी’ सल्लाह सिफारिस गरेको छ।
– आफ्नो गति निर्धारण गर्नुहोस् ता कि तपाईंले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी बोझ नदिनुहोस्। पर्याप्त आराम गर्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
– आफ्ना दिनहरुको योजना बनाउनुस् र अत्याधिक श्रम पर्ने कामहरु एक साताभरमा विभाजन गर्नुहोस्।
– प्राथमिकता बनाउनुहोस्, तपाईंले के गर्नु आवश्यक छ र के छैन भनेर छुट्याउनुहोस्।